Best Chigadzirwa Magadzirirwo e280KW LPG Gesi jenareta Mugadziri uye Fekitori | Naipute
Genset Muenzaniso 280 GFT
Rated Simba (kW / kVA) 280/350
Yakarongwa Izvozvi (A) 504
Kunopindirana divi (L * W * H) (mm) 3850 * 1900 * 2080
Kurema kweNet (kg) 4815
Muenzaniso NY196D32TL (AVL Technology)
Cylinder Nhamba 6
Kwese Kuenda (L) 19.597
Rated Simba (KW) 320
Oiri (L) 52
Muenzaniso 280KZY, NPT muchiso
Kubudirira (%) 93.0
Kushandiswa kwequefied petroleum gasi
(1) Subcritical biotechnology yakadzika tembiricha kubviswa
Subcritical biotechnology yakadzika tembiricha kuburitsa hunyowani hunyanzvi hwekugadzira oiri (butane, chinhu chikuru cheLPG, ine maatomu mana ekabhoni, saka inonzi Nha. 4 solvent). Inofananidzwa neNo. 6 solvent yekubvisa tekinoroji, ine zvakakosha zvehupfumi uye zvemagariro mabhenefiti. Kubatsira kwaro kwakatanhamara ndiko "tembiricha yemukati leaching, yakadzika tembiricha dongo", iyo inogona kutora oiri isina kuparadza zvinoshanda uye kudyara mapuroteni mumafuta, ichigadzira mamiriro ekuburitswa kwemafuta akakosha uye kusimudzira uye kushandiswa kweprotein yemiti. Chechipiri, kushandiswa kwemhepo kushoma, uye kushandiswa kwemarasha mukugadzirwa kwemafuta kunoderedzwa neanopfuura makumi masere muzana, kuitira kuti kuderedze mutengo uye kuburitswa kwe "marara matatu". Panguva imwecheteyo, kana ichienzaniswa neakanyanya kudzvanywa, ine zvakanakira yakaderera mutengo uye hombe chiyero.
(2) Kiln kukangwa
Mazhinji maindasitiri kilns uye mafesi ekushisa anoshandisa yakasanganiswa peturu peturu semafuta, sekukanda mataira epasireni ane gasi rakanyungudutswa, kubheka uye kupeta mahwendefa matete ane gasi remafuta epeturu, ayo asingangoderedze kusvibiswa kwemhepo, asi zvakare anovandudza zvakanyanya kupfura mhando yezvigadzirwa.
(3) Mafuta emota
Liquefied petroleum gasi (LPG) inoshandiswa kutsiva peturu semafuta emota. Shanduko yerudzi urwu yemafuta inonatsa kwazvo mweya yemumaguta, uye iri zvakare rimwe gwara rekuvandudza kweLPG kushandiswa.
(4) Hupenyu hwekugara
Pane nzira mbiri huru dzehupenyu kuvagari: LPG mumabhodhoro uye LPG mumabhodhoro
a. Kuburikidza nezvifambiso: kutakura kwepombi kunoitwa zvakanyanya mumaguta makuru nepakati nepakati. Ndiwo musanganiswa wegasi remafuta uye mweya, chakasanganiswa peturu peturu uye gasi, kana gasi rakanyungudutswa peturu uye nemhepo inoburitswa nemiti yefotereza, nezvimwe nemakambani egasi eguta, inoendeswa zvakananga kudzimba dzevagari kuti ishandiswe kuburikidza nemanejimendi. Mazuva ano, maguta mazhinji akaziva iyi nzira yekutengesa.
b. Kuzadza chikafu: iyo yemabhodhoro yekugovera ndeyekuparadzira LPG kubva kune yekuchengetera uye yekuparadzira chiteshi kune yega yega mhuri kuburikidza yakavharika simbi simbi, iyo inoshandiswa senzvimbo yekupa gasi sosi yemhuri zvitofu.
Pashure: Chigadzirwa Magadzirirwo E150KW LPG Gesi jenareta